मोडल हट नै हुनुपर्छ – मोडल सुनिता - samabeshionline.com
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७५, शुक्रबार ११:३५
छोटो समयमा नै मोडलिङ क्षेत्रमा आफ्नो अबल्ल कलामार्फता दर्शकको ढुकढुकीमा बस्न सफल मोडल हुन् सुनिता दोङ । उनको जन्मभुमि काभ्रे जिल्ला तेमाल गाउँपालिकाको वडा ०९ स्थित तेमाल हुन् । बुबा पन्च लामा दोङ र आमा च्याङ्बारानी तामाङको कोखबाट जन्मिएका उनी सानै देखि कला क्षेत्रमा अत्यन्तै रुची राख्थी । पछिल्लो समयमा उनै दोङको अभिनय रहेको म्युजिक भिडियोले बजारमा निकै चर्चा पाएका छन् भने मोडल दोङको पनि उत्तिकै प्रशंसाक र फ्यानहरु बढेका छन् । दोङको उत्कृष्ट अभिनयको कारण नै उनले नेपाली कथानक चलचित्रमा पनि काम गर्ने मौका पाएकी हुन् । प्रस्तुत छ, उनै मोडल दोङसँग इकमान लामा (इमाला)ले गरिएको कुराकानीः
नेपाली कथानक चलचित्र ‘माया अमृत कि बीस ?’ को सुटिङतिर नै व्यस्त छु । साथमा आफ्नो व्यक्तिगत काम पनि ।
कलाकारिता क्षेत्र नै किन रोज्नु भयो नि ?
यो रोजेको भन्दा पनि आइपरेको हुनाले यो क्षेत्रमा लागेको हो । खासै तिब्र रुपमा चाहिँ होइन । आफ्नो ब्यक्तिगत पेसा र सामाजिक कामबाट खाली रहेको समय नै कलाकारिता क्षेत्रमा दिइरहेको हुन्छु ।
कलाकारिता अथवा मोडलिङ क्षेत्रमा लागेर जिविका चलाउन कठिन भनिन्छ नि, तपाईको चाहिँ अवस्था कस्तो छ ?
कठिनाई नै छ । यस क्षेत्रबाटै जिविका धन्ने भए कलाकारहरु किन व्यावसायतिर लागिर्पथ्यो होला र ? अनि पेशा छोडेर र ऋण गरेर खाडी मुलुकमा गइन्थ्यो होला ? मैले भोकेको र अन्य कलाकार मित्रहरूको देख्दा कलाकारिताबाट मात्रै जिविका चलाउन गह्रो नै छ भन्ने लाग्छ । सहज हुनाको लागि व्यावयिक रुपमा नै कलाकारिताको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्न पाउनुे वातावरण आवश्यक पर्छ । कुनै एउटा मुभि वा म्युजिक भिडियोको काम सकेपछि तत्काल अर्को काम शुरु गरिहाल्न पाउने आवस्था छैन ।
अभिनय बाहेक अरु के–के गर्नु हुन्छ ?
म सानो पेशा पनि गर्छु, भन्नले थान्का लेख्ने काम गर्छु । साथमा फुर्सदको समयमा पढ्ने र संघ–संगठनको काममा हुन्छ ।
कलाकारिता क्षेत्रमा शरीरिक शोषण पनि हुन्छ भन्छ नि, खास के हो ?
शरिरिक शोषण हुन्छ भन्नु भ्रम हो । मैले पनि सुनेको छु । तर देखेको र त्यो अवस्थालाई भने भोग्नु परेको छैन । मैले काम गरेको ठाउँमा एउटै परिवारमा जस्तै अनुभव चाहिँ गरे । यसको मतलब हुदैँ हुदैन भन्ने चाहिँ होइन । जस्तो कि बेलामा नेपाली नायिकाहरुमाथि शोषण भएको समाचार पनि आइरहेको छैन । जे होस्, मैले चाहिँ त्यस्तो अवस्था भोग्नु परेको छैन र भोग्नु नपरोस् पनि ।
अहिलेका परिस्थितिमा सबै क्षेत्रमा चाहिँ देखिन थालेका छन् । चाहे त्यो शिक्षा क्षेत्रमा होस, चाहे अन्य कुनै क्षेत्रमा नै । तर कलाकरिता क्षेत्रमा लागेको ब्यक्तिको जसरी भाइरल चाहिँ अरु क्षेत्रमा हुन्न । झन् अहिले हाल अबस्थामा सोझा साझा, बृद्धा र बालकमाथी व्यापक बलात्कार नै भइरहेकै छ । यसको एउटा जलन्त उदाहरणको रुपमा निर्मला बलात्कार काण्डलाई लिन सकिन्छ ।
तपाईको नजरमा कलाकारिता अर्थात मोडलिङ क्षेत्रको बर्तमान आवस्था कस्तो देखिरहनु भएको छ ?
यो क्षेत्रमा लाग्ने कलाकारहरुलाई मिडियाले आफ्नो तर्फबाट धेरै सहयोग गरिरहेका छन् । कलाकारहरु पनि सङ्ख्यात्मक रुपमा बढीरहेका छन् । तर पनि अहिलेको अबस्थामा मैले देखेको अनुसार कलाकार वा मोडल बन्न आफैले लगानी गरेर आएको धेरै देखिन्छ । कला र गला बोकेर आउनुपर्ने क्षेत्रमा पैसा बोकेर आएको कुरा पनि बेला बखत सुनिन्छ । त्यो चाहिँ अलि दुःखद् कुरा हो । कलालार्इ अझै राम्रोसँग बुझ्न र चिन्न सकिरहेको छैनन् जस्तो लाग्छ ।
प्रायः जसो कलाकार तथा मोडलहरुले हाट फोटो सुट गरिएको देखिन्छ भने अभिनय पनि हाट नै गरिरहेको हुन्छ, के त्यस्तो सुट र अभिनय जरुरत नै पर्छ र ?
कलाकार तथा मोडल केही हदसम्म हट नै हुनुपर्छ । यो पनि एउटा कलाकारको कला हो किनभने दर्शकलाइ आकर्षक गर्न हट अलिअलि हट हुनु पनि पर्छ नि हा हा …। कहिले काहीँ त्यो पनि जरुरत पर्छ । तर बजार र दर्शकले स्वीकार नै नसक्ने गरी आवश्यकता भन्दा धेरै माथि चाहिँ जानु हुन्न भन्ने हो । यसको पनि कलाकार कतिसम्म हट हुने भन्ने एउटा सीमा हुन्छ नि ।
यो क्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ कलाकारको लागि तपाईको सुझाव के छ ?
यो क्षेत्रमा आउने नयाँ कलाकार मित्रहरूले कला र गलाको भारी बोकेर आउनुहोला । रहर लाग्यो भन्दैमा राम्रोसँग नबुझी, नसिकी हाम फाल्नु पनि राम्रो होइन । त्यसैले बुझेर, सिकेर मात्र यो क्षेत्रमा लाग्दा राम्रो होला । कतिपय कलाकार मित्रहरु अरुको प्रलोभनमा परेर, बिना कला र खोज अनुसन्धानविना यो क्षेत्रमा लागेर फासेको वा दुःख पाएका धेरै छन् । अझ कलाकार बन्न आफैले लगानी गरेको पनि देखिन्छ । त्यो राम्रो पक्ष होइन । कलाकारिता क्षेत्रमा के कस्तो हो ? यसमा निरन्तर रुपमा लाग्न सकिन्छ कि सकिन्न ? यी सबै कुरामा पहिला राम्रोसँग सोच विचार र बुझेर प्रवेश गरेमा धेरै राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु ।
यति राम्री हुनुहुन्छ, ब्वाइफ्रेन्ट त हुनुहुन्छ होलानी ?
हा हा …. । ब्वाइफ्रेन्ट त अब बनाउने सोचमा चाहिँ छु ।
कलाकारिता क्षेत्रमा रहेका नारी कलाकारहरुलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण परिवर्तन गर्न अनुरोध गर्दै माहिला कलाकारलाई पनि पुरुष कलाकारलाई जस्तै व्यवहार र सम्मान गर्नु होला भन्न चहान्छु । कुरा जत्ती लामो गरेपनी त्यस्तै हो कहिले सकिदैन । अन्तमा मेरो विचारहरुलाई राख्ने अवसर दिनु भएको धन्यवाद । यो समाचार हरेक बिहीबार काभ्रेबाट प्रकाशित हुने डाँडापारि सन्देश साप्ताहिकमा छापिएको छ ।
टुँडिखेलमा ७५ हजारले एकैसाथ भने BUDDHA WAS BORN IN NEPAL
गायक एंव गीतकार कोष बम्जनको शब्दमा “चोट लाग्यो जिन्दगीमा” सार्वजानिक (भिडियोसहित )
साँगामा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप, दशैंसम्म घरटहरा नहटाउन स्थानीयको माग
लिस्नर्स क्लव नेपालद्धारा तीन नारी स्रष्टा सम्मानित
सोल्टिनीलाई नायक सविना श्रेष्ठले भगाए,१५ गतेबाट प्रदर्शनमा अाउने (भिडियोसहित)
मोडल सोयल लामाकोे ‘ल्हास्सो ल्हास्सो फ्याफुल्ला’ सार्वजानिक (भिडियोसहित)
निस्वार्थ भावले सामाजिक सत्कर्ममा होमिएका व्यक्ति जस्ले ९६ वेवारिसे लाशहरुको सद्गद् गरिसकेको छ
नयाँ मुलुकी संहिता नश्लीय भएको भन्दै संशोधन गर्न आदिवासी जनजातिको माग